တရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာသစ် ၂,၂၀၀ ကျော်၊ ၈၇ ဦးထပ်မံသေဆုံး – DVB
တရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာသစ် ၂,၂၀၀ ကျော်၊ ၈၇ ဦးထပ်မံသေဆုံး
EDITORS NOTE: Graphic content / This photo taken on August 6, 2021 shows volunteers wearing personal protective equipment (PPE) disinfecting the body ofamonk suspected of dying of the Covid-19 coronavirus atamonastery before transferring him toacrematorium in Taungoo district in Myanmar's Bago region, some 220km from Yangon. - As Myanmar facesadeadly resurgent wave of Covid-19,atightknit team of volunteers working tirelessly to treat, bury and cremate coronavirus victims are facing stigma from their families and being told not to return home due to fear of spreading the disease. (Photo by Ye Aung Thu / AFP) / To go with 'MYANMAR-HEALTH-VIRUS,PHOTOESSAY'/2021-08-10 15:26:46/
Published By DVB | 14 September, 2021
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာသစ် ၂,၂၀၀ ကျော်နဲ့ ၈၇ ယောက် ထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက်ညပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီစစ်ဆေးမှုဟာ အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု (CDM) မှာ ပါဝင်နေကြတဲ့ ဆေးရုံ တွေ၊ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းတွေ မပါဝင်ဘဲ စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံ တပ်မတော်ဆေးရုံတွေ အများစုမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့တာမို့ ရောဂါကူးစက်မှု တိကျတဲ့ ပမာဏအတိုင်းအဆ ကိုတော့ မသိနိုင်သေးပါဘူး။
ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၂၃,၄၂၄ ခုကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ ရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ၂,၂၇၃ ယောက် တွေ့ရှိခဲ့တာမို့ ပိုး တွေ့နှုန်း ၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ရှိနေပါတယ်။
ရောဂါပြန်လည်ပျောက်ကင်းသက်သာလာလို့ ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရသူအရေအ တွက်ကတော့ ၂,၉၆၆ ယောက်ရှိနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၁၆,၆၁၇ ယောက်နဲ့ ရောဂါကူးစက်ခံရသူ စုစုပေါင်း ၄၃၄,၁၀၆ ယောက် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လတ်တလော ရောဂါကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်နေတာကြောင့် နိုင်ငံတဝန်း စာသင် ကျောင်းတွေ ပိတ်ထားသလို ရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ အများပြည်သူ ရုံးပိတ်ရက်အဖြစ် အခုစက်တင်ဘာလ ကုန်အထိ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ကြောင်း စစ်ကောင်စီက ကြေညာထား ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရောဂါ ကူးစက်မှုများတဲ့ နိုင်ငံတဝန်း မြို့နယ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော်ကို လည်း Stay At Home အမိန့်ထုတ် ပြန်ထားပါတယ်။
ဘရာဇီးတွင် အိုမီခရွန်ကူးစက်ခံ လူနာတွေ့ရှိ၊ နှစ်သစ်ကူးအကြိုညပွဲ ဖျက်သိမ်း